प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय ८८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरा वचनहरू सुनेर धेरैजसो मानिसहरू डराउँछन् र काँप्छन्, उनीहरूको अनुहार चिन्ताले खुम्चिन्छन्। के मैले वास्तवमा तँलाई अन्याय गरेको छु? तँ ठूलो रातो अजिङ्गरको एउटा सन्तान होइनस् भन्‍ने हुनसक्छ? तैंले असल छु भन्‍ने बहाना पनि गरिस्! तैंले मेरो जेठो छोरा भएको बहाना पनि गरिस्! के म अन्धो छु भन्‍ने तँलाई लाग्छ? के म मानिसहरूको बीचमा भिन्नता छुट्याउन सक्दिनँ भन्‍ने तँलाई लाग्छ? म हुँ जसले मानिसका भित्री हृदयलाई खोतल्छ: म मेरा छोराहरूलाई यही भन्छु, र त्यस ठूलो रातो अजिङ्गरको बच्चाहरू, तिमीहरूलाई पनि म यही नै भन्छु। म सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि गल्ती नगरी सबै कुरा स्पष्टसँग देख्छु। मैले के गर्छु भनी मलाई कसरी थाहा हुँदैन र? म के गर्छु त्यसबारे मलाई स्पष्ट थाहा छ! म स्वयम्‌, ब्रह्माण्ड र सबै थोकका सृष्टिकर्ता हुँ भनी म किन भन्छु? म मानिसहरूको भित्री हृदय जाँच गर्ने हुँ भनी किन भन्छु? म हरेक व्यक्तिको परिस्थितिलाई राम्ररी जान्दछु। मैले के गर्नुपर्छ वा के भन्नुपर्छ सो जान्दिनँ भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्छ? यो तेरो चिन्ताको विषय होइन। मेरो हातद्वारा नमारिनका निम्ति होसियार बस्; त्यस तरिकाले त तैँले घाटा बेहोर्नेछस्। मेरा प्रशासनिक आदेशहरूले क्षमा गर्दैन। के तँ बुझ्छस्? माथिका सबै कुरा मेरो प्रशासनिक आदेशहरूका भाग हुन्। जुन दिनदेखि म तिमीहरूलाई ती कुरा बताउँछु, यदि तिमीहरू अझ अरू अपराधहरू गर्छौ भने त्यसको फल भोग्नेछौ, किनकि पहिले तिमीहरूले बुझेका थिएनौ।
मैले शैतानको न्याय अघिबाटै गरिसकेको छु। मेरो इच्छामा कुनै बाधा नभएकोले, र मसँगै मेरा जेठा पुत्रहरूको महिमा प्राप्त गरेका हुनाले, मैले संसारमा आफ्नो धार्मिकता र प्रताप संसार अनि शैतानको अधिकारमा रहेका सबै थोकमाथि अघिबाटै प्रयोग गरेको छु। म शैतानमाथि औंला उठाउँदिन वा त्यसमा बिलकुल ध्यान दिँदिनँ (किनकि त्यो मसँग कुराकानी गर्न लायक पनि छैन)। म जे गर्न चाहन्छु त्यही नै गर्दैजान्छु। मेरो काम एक-एक चरण गर्दै सुचारु रूपले अगाडि बढ्छ, र सारा पृथ्वीभरि मेरो इच्छालाई कुनै बाधा हुँदैन। यसले शैतानलाई एक हदसम्म सर्ममा पारेको छ, र त्यो पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ, तर त्यसैमा मेरो इच्छालाई पूरा भएको छैन। म मेरा जेठा छोराहरूलाई पनि मेरा प्रशासनिक आदेशहरू पूरा गर्न दिन्छु। एकातिर, म शैतानलाई त्यसप्रतिको मेरो क्रोध देख्न दिन्छु, अर्कोतिर, म मेरो महिमा देख्न दिन्छु (मेरो जेठा छोराहरू शैतानको अपमानको निम्ति सबैभन्दा जोरदार गवाही हुन् भन्‍ने देख्‍न दिन्छु)। म त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा दण्ड दिँदिनँ; बरु, म मेरा जेठा छोराहरूलाई मेरो धार्मिकता र प्रताप पूरा गर्न दिन्छु। शैतानले मेरा छोराहरूलाई दुर्व्यवहार गर्थ्यो, मेरा छोराहरूलाई सताउँथ्यो, र मेरा छोराहरूमाथि थिचोमिचो गर्थ्यो, त्यसैले आज त्यसको सेवा समाप्त भएपछि, म आफ्ना परिपक्व जेठा छोराहरूलाई त्यो मिलाउने अनुमति दिनेछु। शैतान पतनको विरुद्ध शक्तिहीन भएको छ। संसारका सबै जातिहरू पक्षाघात हुनु यसको सबैभन्दा राम्रो गवाही हो; मानिसहरू झगडा गरिरहेका छन् र राष्ट्रहरू लडाइँमा फसेका छन्, यी सब शैतानको राज्यको पतन भएको स्पष्ट प्रकटीकरणहरू हुन्। विगतमा मैले कुनै चिन्‍ह र अचम्‍मका कामहरू नदेखाउनुको कारण शैतानको अपमान गर्नु र एक-एक चरण गर्दै मेरा नाउँको महिमा गर्नुथियो। जब शैतान पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ, म मेरो शक्ति देखाउन सुरु गर्छु: म जे भन्छु त्यो हुन आउँछ, र मानिसका धारणाहरूसँग मेल नखाने अलौकिक कुराहरू पूरा हुनेछन् (यी कुराले चाँडै आउने आशिषहरूलाई जनाउँछन्)। म व्यावहारिक स्वयम् हुँ र मेरो कुनै नियमहरू छैनन् र म मेरो प्रबन्ध योजनामा हुने परिवर्तनहरू अनुसार बोल्छु, त्यसकारण विगतमा मैले भनेका कुरा वर्तमानमा लागू हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन। तेरा आफ्नै धारणाहरूमा टाँसिएर नबस्! म नियमहरू पालन गर्ने होइनँ; मेरो निम्ति सबै कुरा स्वतन्त्र, अनुभवभन्दा पर र पूर्ण रूपमा मुक्त छन्। सायद हिजो भनिएको कुरा आज पुरानो भएको छ, वा सायद त्यसलाई आज पर पन्साउन सकिन्छ (तापनि, मेरा प्रशासनिक आदेशहरू, घोषणा गरिएकोले ती कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैनन्)। यी मेरो व्यवस्थापन योजनाका चरणहरू हुन्। नियमहरूमा अल्झेर नबस्। प्रत्येक दिन नयाँ ज्योति छ र नयाँ प्रकाशहरू हुन्छन्, र त्यो मेरो योजना हो। प्रत्येक दिन मेरो ज्योति तँभित्र प्रकट गरिनेछ र मेरो आवाजलाई ब्रह्माण्ड संसारमा जारी गरिने छ। के तँ बुझ्छस्? यो तेरो कर्तव्य हो, मैले तँलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। तैंले एकै क्षणका लागि पनि यसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। मैले स्वीकार गरेका मानिसहरूलाई म अन्त्यसम्म प्रयोग गर्नेछु, र यो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। किनकि म सर्वशक्तिमान्‌ हुँ, कस्तो किसिमको व्यक्तिले के काम गर्नुपर्छ, साथै कुन किसिमको व्यक्तिले कस्तो काम गर्न सक्छ सो म जान्दछु। यो मेरो सर्वशक्तिमान्‌ता हो।